Trump oo diiday ka qeyb galka dhageysiga Dacwada xilka looga qaadayo.
Monday December 02, 2019 - 11:33:19 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Aqalka Cad ee Mareykanka looga arrimyo ayaa iska diiday in uu ka qeyb galo dhageysiga dacwadaha ladoonayo in lagu casilo Donald Trump oo ah madaxweynaha Mareykanka.
Warqad uu qoray Trump ayaa loo gudbiyay Jerry Nadler oo ah madaxa cadaaladda ee Golaha Koongareeska.
Maamulka Trump ayaa diiday in uu ka qeyb galo fadhiga dacwad dhageysiga ka dhanka ah madaxweynaha Mareykanka kaasi oo maalinta Arbacada ka dhici doona magaalada Washington.
Taliyaha gaarka ah ee Trump ayaa warbaahinta usheegay maalintii Axadda in aan lagusoo wargelin dhageysiga dacwadda oo maraysa meel xasaasi ah, dacwadaha ladoonayo in lagu casilo madaxweynaha Mareykanka waxaa kamid ah in uu xiriiro sharci darro ah lasameeyay madaxda dalka Yukreen iyo in uu qaatay lacago Laaluush ah.
Dambiyada kale ee Trump lagu heysto waxaa kamid ah maamul xumo iyo in uu liiday Golaha Koongareeska oo u dhigma baarlamaan, maalinta Arbacada ayuu guddiga cadaaladda golaha Koongareeska qaban doonaa fadhi uu ku dhageysanayo heerka ay gaarsiisanyihiin dacwadaha lagu casilayo Donald Trump.
Illaa iyo hadda lama oga in dacwada socota ay sababi doonto in Trump xilka laga tuuro iyo inkale, tan iyo markii uu Trump qabtay xilka madaxweynaha xukuumadda Washington ayuu ku dhaqaaqay tallaabooyin buuq siyaasadeed ka dhaliyay gudaha iyo dibadda Mareykanka.
Donald Trump oo xaalad degdeg ah kusoo rogay dalka Mareykanka.
Askar DFS looga dilay Awdheegle iyo Ugandheyska heysta Bariire iyo Sabiid oo la Weeraray.